JOB Profile | ictkhabar
JOB Profile (Total Posts : 2489 )
एप्पलले आईफोन ११ का साथै नयाँ आईप्याड र नयाँ म्याकबुक सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नयाँ आईप्याडमा १०.२ इन्चको डिस्प्ले स्क्रिन र म्याकबुकमा १६ इन्चको स्क्रिनको प्रयोग गरिनेछ । एप्पलका निकट विश्लेषकका अनुसार नयाँ आईफोन ११ मा एप्पल पेन्सिलको सपोर्ट पनि मिल्नेछ । यदि यसो भएको खण्डमा यो पेन्सिल...
मोबाइल रेडियसनको असर: एउटै बालकको मुखमा ५२६ वटा दाँत
भारतमा पनि एक घटना भएको छ । भारतको चेन्नाईमा एक डेन्टल कलेजका डाक्टरहरु चकित परिरहेका छन् । चेन्नाईस्थित सविता डेन्टल कलेजका डाक्टरहरुको एक सात वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकालेको दाबी रहेको छ । मानिसको मुखबाट यति धेरै दाँत निकालिएको यो विश्वकै पहिलो घटना भएको समेत डाक्टरहरुका बताउछन् ।...
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट टिनएजर र युवा टाढिँदैछन् । कन्सल्टेन्सी ईमार्केटरका अनुसार ६० वर्षका बृद्धको तुलनामा १६ वर्षीय अमेरिकी फेसबुकलाई कम मनपराउन थालेका छन् । कम्तिमा महिनामा एकपटक फेसबुकमा लग इन गर्ने १२ देखि १७ वर्षका युवाको प्रतिशत मात्र ३९ रहेको छ ।...
नेपाली संगीत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी प्राध्यापक तथा गायिका शोभा तिवारी लोहनीको काव्यकृति ‘आमा ! मेरी आमा’को लोकार्पण भएको छ । शुक्रबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद् डा.तुलसी दिवसको प्रमुख आथित्यमा उक्त पुस्तकको लोकार्पण गरियो । उनका दुई छोरी ऋचा शर्मा तिवारी, स्मृति थपलिया र...
आइसिटी अवार्डका उत्कृष्ट ५ ? यसरी गर्नुहोस् अनलाइन र एसएमएस भोटिङ
आइसिटी अवार्ड २०१९ काे एक महत्वपूर्ण विधाको रुपमा रहेको प्रडक्ट आइसिटी अवार्डमा गतवर्ष जेठ १५ गतेदेखि यस वर्ष जेठ १४ सम्म सार्वजनिक भएका प्रडक्टहरुले सहभागिता जनाएका थिए । यो विधामा पहिलो चरणमा उत्कृष्ट ११ प्रडक्ट छानिएका थिए । उत्कृष्ट ११ मा विधाना, डेल्टा सेल्स एप, डिजिटल एड नेटवर्क प्लाटफर्म, प्रोमिस...